BLG Mind na-enyere ụmụ akwụkwọ aka inweta ahụike uche ha - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
BLG Mind na-enyere ụmụ akwụkwọ aka ịchọpụta ahụike uche ha
Ihe na March 10, 2022 site BLG Uche Udi: General
Ndị otu BLG Mind nọ n'aka iji nyere ụmụ akwụkwọ mahadum Greenwich aka ịmalite nkà nka ha yana ahụike uche ha n'oge na-adịbeghị anya.
Ụmụ akwụkwọ ahụ wepụtara ihe okike ha na mmemme Brush Therapy na mahadum. Ndị ọrụ BLG Mind nyere aka mee ka mgbede ahụ dị mfe ma gwa ụmụ akwụkwọ ahụ gbasara ahụike uche.
BLG Mind's Deepanshi Gulati na-atụle uru nke ọgwụgwọ nka
Onye ọrụ nkwado ndị ọgbọ Deepanshi Gulati kwuru gbasara uru ọgwụgwọ nka maka ahụike uche, ebe onye njikwa nkwado ndị ọgbọ Charlotte Thomson nyere nkọwa nke nkwado ahụike uche BLG Mind na-enye na Greenwich. Ndị ọrụ BLG Mind nyekwara ụmụ akwụkwọ ahụ akpa nkata na ozi.
Ndị ọrụ BLG Mind na mmemme Mahadum Greenwich
N'etiti okwu ndị ahụ, ihe dị ka ndị bịara 25 nwere ohere ịtụgharị akwa akwa ka ọ bụrụ ọrụ nka (dị n'okpuru).
Charlotte kwuru, sị: “Ọ bụ ihe omume mara mma. Ndị bịaranụ nwere obi ụtọ imecha ihe osise. Ikuku ahụ nwere ahụ iru ala n'ezie, ma mepụta ụfọdụ ọmarịcha iberibe.
"Anyị nwere ntụaka ole na ole n'ime ozi anyị, ọ dịkwa anyị ụtọ ịhụ ka anyị nwere ike ịkwado ụmụ akwụkwọ na-aga n'ihu, karịsịa site n'ìgwè ọhụrụ Ndị Na-eto Eto Na-eto Eto."
Ihe omume ahụ welitere £750 dị egwu maka ọrụ anyị.
BLG Mind nwere mmekọrịta guzosiri ike na Mahadum Greenwich. Site na Septemba 2019 ruo Ọgọst 2021, anyị weputara oru ngo mahadum nke ahụike uche, nke kwadoro ahụike uche nke ndị ọrụ na ụmụ akwụkwọ na nguzobe ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị nyere akwụkwọ ozi (eserese aka nri) n'ofe ụlọ akwụkwọ ahụ na-edepụta ọrụ nkwado ahụike uche dị iche iche, yana njikọ QR na ozi gbasara ahụike uche ụmụ akwụkwọ na weebụsaịtị Mind nke mba.
Nkwado ahụike uche nke BLG na Greenwich.
Ọ ga-amasị gị iso anyị mee mmemme mmata ma ọ bụ ịkpata ego? Chọpụta ihe.